Ngosiputa Ngwa, Ugwu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ngosiputa Ngwa, Perfumery
Ndewo Mana, ị nwere ike ị gụkwuo maka Dermafutura? Emeghebeghị m ude na ude, mana enwere obi abụọ!
Ndewo Mana, ị nwere ike ị gụkwuo maka Dermafutura? Emeghebeghị m ude na ude, mana enwere obi abụọ! n'eziokwu Amaghị m otu i siri bịa "ihe ịchọ mma" a, mana ị…
Kedu aha ihe ịchọ mma?
Gini bu aha ihe ntecha? 1 Primer - ntọala maka etemeete. Ọ dị mkpa mgbe ị na-eji ọtụtụ ọnụọgụ ihu iji gbochie ịmegharị ma melite ngwa. Consoaler 2 - etinyere n'okpuru anya maka ...
Onye na-ele Verutica Nikoku YouTube. Kedu ka o si dị ka blogger? Na onye ọzọ ka ị na-ahụ n'asụsụ Russian na ụwa nke ịchọ mma. Mkparịta ụka ahụ
Onye na-ele Verutica Nikoku YouTube. Kedu ka o si dị ka blogger? Na onye ọzọ ka ị na-ahụ n'asụsụ Russian na ụwa nke ịchọ mma. Nyochaa Nikoko ee, ọchị, okwu, mma. Ma kpọmkwem otú ...
Ihe ị ga - eme: akpụkpọ anụ bụ mmanu mmanu, ma ọ bụ ezigbo ụcha?
Ihe ị ga - eme: akpụkpọ anụ bụ mmanu mmanu, ma ọ bụ ezigbo ụcha? Ị dịghị mkpa creams. Ụdị akpụkpọ ahụ kwesịrị moisturized, moisturized na moisturized ọzọ. N'ezie, otu ude adịghị ezuru, ịkwesiri ibu ...
You nwere mmasị na ahiri kpochapụl dị ọcha dị ọcha?
You nwere mmasị na ahiri kpochapụl dị ọcha dị ọcha? Ee, ọ dị mma nke ukwuu. na agamdị maka otu ụdị ọnụahịa a) m jiri ihe mkpofu a ruo otu afọ ma ọ nweghị enyemaka m, ...
Kedu agba nke onyinyo dị mma maka anya isi awọ?
Kedu agba nke onyinyo dị mma maka anya isi awọ? pink, blue, blue, purple, brown Isi agba agba m ga-ekwu na isi awọ anya nke ọma na ọ fọrọ nke nta ka mgbe niile na-anabata ihe yiri otu ntụ ntụ ...
Ekwuru na mmanụ ogwu dị mma maka pyschka na wrinkles. Ọ bụ otú ahụ?
Ekwuru na mmanụ ogwu dị mma maka pyschka na wrinkles. Ọ bụ otú ahụ? Nri nke azụ azụ nwere mmetụta dị mma n'ahụ. Site na wrinkles ọ na-enyere aka. Ma ọ bụghị n'otu ntabi anya, kama na ọhụụ ....
Kedu ka esi ehichapụ ihu gị site na ntụ ojii n'ụlọ?
Kedu ka esi ehichapụ ihu gị site na ntụ ojii n'ụlọ? ncha nke nnu na soda, mix, were ncha snoo na-etinye ya na ncha. mgbe ahụ n'ime ngwakọta a na ihu, ubé ...
Kedu ihe mmiri de toilette na-enyocha? Kedu ihe dị iche na mmiri mposi naanị?
Kedu ihe mmiri de toilette na-enyocha? Kedu ihe dị iche na mmiri mposi naanị? àgwà na ọdịnaya nke mmanụ dị mkpa bụ otu, kere iji nwalee na nyocha, na ezigbo ísì dị ogologo oge, ị ...
Ihe deodorant AX maka ụmụ nwoke
Ụdị ụdị AX maka ụmụ nwoke abụghị ebe a na cat bụ ezigbo AX dịka mụ onwe m bụ otu n'ime ndị deodorants kachasị. Isi nke ọnụ ala, enweghi mmetụta nke uto na Moviton. Chocolate N'ala ...
Japanese perfume ụdị ... +
Japanesedị ndị na-esi ísì ụtọ ndị Japan ... + Ka m kọtụrụ gị nkenke, ihe ndị na-esi ísì ụtọ nke Japan bụ ụwa dị iche, ike dị iche. Aromas dị jụụ. Nwere ike iyi ha naanị na ọnọdụ ụfọdụ, ha na-arịọ ka obi jụụ, nwayọ ...
Ebee ka m nwere ike ịzụta Mary Kay cometics?
Ebee ka m nwere ike ịzụta Mary Kay cometics? naanị onye ọkachamara nọọrọ onwe ya. chọta ụlọ ọrụ gọọmentị nke Mary Kay, edere ihe niile n'ebe ahụ. Ị nwere ike ịbanye ebe ahụ dịka onye ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Mee usoro nke aka gị, ihe nrocha mma ka a ga-ewebata n'ụlọ gị! ...
Ụmụ agbọghọ, kedu ka ị nwere mmasị Gardenia Chanel? Anụrụ m nzaghachi ịnụ ọkụ n'obi site n'aka enyi, Achọrọ m ịmara echiche gị.
Girlsmụ nwanyị, kedụ otu masịrị ụtọ Paradiseia Chanel? Anụrụ m na ịnụ ọkụ n’obi na-enyocha enyi m, m chọrọ ịma echiche gị. Otu ihe kachasị amasị m ... ọ bụghị naanị site na Chanel. Udiri n’ikiri anyi nma .......
Kedu ihe dị iche na-esi ísì ụtọ atomiseur naturel na perfume vaporisateur.
Kedu ihe dị iche na-esi ísì ụtọ atomiseur naturel na perfume vaporisateur. ma obughi nke oma inwale ihe na isi ka itinye?))) nke n’abia)) na ajuju - opekata mpe irighiri ahihia (karama, karama) nwere ike di iche)
Mwepụ nke antennae na wax na n'ozuzu, ihe efu, onye na-ekwu na ị gaghị ewepu ntutu na wax n'elu egbugbere ọnụ gị. A na-ere ihe nkedo pụrụ iche maka mpaghara a. A ghacha kpoo akpụkpọ ahụ tupu usoro ahụ, kpoo ya na ...
Nyere nyere aka kpochapụ ọchịchịrị n'okpuru anya. Nye ndụmọdụ ụdị creams, tonalnikov, na-enyere aka, wdg.
Nyere nyere aka kpochapụ ọchịchịrị n'okpuru anya. Nye ndụmọdụ maka ụdị ude, tonalniki, enyemaka ndị mmadụ, wdg. Ọ dịghị ude mmiri gbara ọchịchịrị n'okpuru anya anaghị ebibi. Ọ dị mkpa ịlele ma chekwaa imeju. Ọgwụgwọ ...
Kedu ka esi kpoo anya nku ugha n'enweghi mmanu? ma eleghị anya, ihe na-emetụta improvised pụtara ???
Etu esi gusi nku anya ugha n’enweghi mmanu? ma eleghi anya ufodi ihe ufodu ji eme ihe? Mkpesa ahụike bf-6 Snot m rapaara “pva” na gluu, mana nke a zuru izu otu izu iji nyere mmadụ aka…
Kedu ihe mmiri rutere na ebee ka m nwere ike ịzụta ya?
Kedu ihe mmiri rutere na ebee ka m nwere ike ịzụta ya? Vodichka, sweetened. M zụtara na Thailand http://krimdar.com/ NKỌKWU NDỊ ỌZỌ M, kwa, na ụlọ ọgwụ! ma n'eziokwu n'ejighi ya egwu ...
Kedu ka esi kpochapụ ọchịchịrị n'okpuru anya, kedu ihe ga - eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha? Ahụike dị mma ma enwee ụra zuru ezu ...
Esi kpochapụ okirikiri gbara ọchịchịrị n'okpuru anya, gịnị ga-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha? Ahụike dị mma ma enwere m ụra zuru oke ... O yikarịrị ka ị ga-enwe akpụkpọ ahụ dị gịrịrị na capillaries na-enwu site na. Mụ onwe m ...
Kedu ihe bụ sodium alginate na cosmetology na kedu ka nkpuchi alginate bara uru?
Kedu ihe bụ sodium alginate na cosmetology na kedu ka nkpuchi alginate bara uru? Na njedebe nke narị afọ gara aga, na 1883, onye England bụ Stanford chọtararịrị alginic acid dị elu nke dị arọ na ngwongwo nke agba aja aja ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,488.